TOYOTA ၏ THE ALL-NEW COROLLA CROSS online မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ - 资讯 - 新闻频道 - 仰光(yangon)智慧生活
TOYOTA ၏ THE ALL-NEW COROLLA CROSS online မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ
[摘要] TOYOTA ၏ THE ALL-NEW COROLLA CROSS online မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ
လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်လာနိုင်သည့် TOYOTA ၏ THE ALL-NEW COROLLA CROSS online မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ
၄ ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀။ ။ ယနေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် TOYOT ကနေ၍ The All-New Corolla Cross online မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို Live အစီအစဉ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်လိုက်သည်။
All-New Corolla CROSS သည် ယာဉ်အတန်းအစားအသစ်ထဲမှ ထုတ်ကုန်သစ််တခုဖြစ်ပြီး Toyota တွင် တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဖူးသော အလယ်အလတ်အရွယ်အစား SUV ယာဉ်အမျိုးအစားတခုဖြစ်သည်။ “Dignity Urban & Vogue” ဟူသော သဘောတရားအောက်တွင် Corolla CROSS သည်ပိုင်ရှင်များထံသို့ အဆင့်အတန်းတဆင့်ပိုမြင့်သော မြို့ပြလူနေမှု Lifestyle နှင့် ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းအတွက်များစွာဂုဏ်ယူနိုင်သော စိတ်ခံစားမှုများကို ယူဆောင်ပေးနိုင်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရောင်းရဆုံး Corolla ကားကို ဝယ်ယူသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာတဖြည်းဖြည်းတီထွင်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ အလယ်အလတ်အရွယ်အစား SUV ယာဉ်အမျိုးအစားသည် ဖွံ့ဖြိုးစပြုလာသောဈေးကွက်တွင် တဖြည်းဖြည်းရေပန်းစားလာသည့်အမြင်ကြောင့် Corolla ၏ သမိုင်းစာအုပ်ထဲတွင် Corolla CROSS ကို “နာမည်ကျော်မျိုးဆက်သစ်ကား၏ပုံရိပ် (the shape of the new generation popular car)” ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားရှိသည်။ Corolla CROSS သည် Corolla Sedan ကိုအခြေခံထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်း၏အရည်အသွေး၊ တာရှည်အကြမ်းခံနိုင်မှု နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ကို သေချာစွာအာမခံနိုင်၏။ ထို့အပြင် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်မှု၊ မာကြောမှုတို့နှင့်အတူ ပြန်ရောင်းလျှင်ဈေးကောင်းရနိုင်မှုတို့ကိုလည်း အာမာခံနိုင်သည့်ကားမျိုးဖြစ်သေးသည်။ ထိုအချက်များအားလုံးမှာ ဧကန်မုချအတုမရှိသော Toyota ၏ ဝိသေသအမှတ်အသားများဟူ၍ပင် Toyota ကဆိုထား၏။
ကြော့မော့လျှင်မြန်သော၊ သွက်လက်သော၊ ကြံခိုင်သောအပြင်ပန်း နှင့် ကျယ်ဝန်းသော အထူးငြိမ့်ညောင်းသော၊ မှတ်ချက်ပေးရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောအတွင်းခန်း စသောတောင့်တင်းသည့်ခံစားမှုမျိုး ပေးစွမ်းနိုင်ရန် ဤကားကိုလက်ရာပြောင်မြောက်စွာ အထူးဖန်တီးထားသည်။ ထို့အပြင် ဝယ်ယူသူတိုင်း၏ စိတ်ကျေနပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် Lifestyle တို့ကို လိုလေသေးမရှိအောင် ဒီဇိုင်းဖန်တီးထားပြီး ခြေထောက်ဖြင့်ထိန်းချုပ်၍ရသော နောက်ဖုံးတံခါးအာရုံခံစနစ် (Power Back Door with Activated Kick Sensor) နှင့် အထူးချိန်ညှိနိုင်သော ပစ္စည်းထားသိုမှုဧရိယာစသော အလွန်ကောင်းမွန်သည့် လုပ်ဆောင်နိုင်ချက်များနှင့် ကိရိယာများစွာကို “All-new Corolla CROSS” တွင်ထည့်သွင်းပေးထားသည်။ ထို့နောက် ဤကားသည် နာမည်တွင်ကျယ်သော Toyota ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိသုကာပညာအသစ် (Toyota New Global Architecture) ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် သွက်လက်မှု၊ငြိမ်သက်မှု နှင့် မြင်ကွင်းကင်းရှင်းမှု စသောခေတ်ရှေ့ပြေးသည့် မောင်းနှင်မှုစွမ်းပကားများကို အသေအချာပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ခရီးစဉ်တိုင်းတွင် စိတ်ချမ်းသာမှုရရှိနိုင်ရန် ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ Toyota Safety Sense (ယာဉ်မတိုက်အောင်ကြိုထိန်းပေးသော “Pre-Collision System”၊ ရှေ့မီးကို အလိုလျောက်ချိန်ပေးသောစနစ် “Automatic High Beam”၊ ယာဉ်လမ်းကြောသွေဖယ်သွားလျှင်အချက်ပေးသည့် “Lane Departure Alert” နှင့် ရေဒါစနစ်ဖြင့်ထိန်းပေးသော ကားရှိန်နှုန်းထိန်းကိရိယာ “Dynamic Radar Cruise Control”) တို့ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ All-New Corolla CROSS ကို ၁.၈-လီတာ ဓါတ်ဆီအင်ဂျင် ဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီး အလွန်ဆီစားသက်သာ၍ အရှိန်မြှင့်တင်ရာတွင်လည်းအလွန်မြန်ဆန်ပါသည်ဟုလည်း Toyota ကဆိုထားသေးသည်။
“New Journey for New Leaders” (“ခေတ်သစ် ခေါင်းဆောင်များအတွက်ခရီးလမ်းသစ်”) ဆောင်ပုဒ်အောက်တွင် All-New Corolla CROSS သည်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များကို “ကမ္ဘာနှင့်ရင်ဘောင်တန်းနိုင်” သောခံစားမှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် နည်းပညာနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ပြည့်စုံစွာတပ်ဆင်ပေးထားပြီး ဘဝခရီးလမ်းတစ်လျှောက်တွင် အောင်မြင်မှုများကို ရယူဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
All-New Corolla CROSS ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၄,၃၀၀ ဖြင့် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်စရာ အပြင်ဆေးအရောင် ၇ မျိုးနှင့် အတွင်းထိုင်ခုံအရောင် ၂ မျိုး ထွက်ရှိပါသည်။ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ ၂၀၂၀ မှစ၍ ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါသည်ဟူ၍လည်း Toyota က သတင်းကောင်းပေး ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ပေါ်လွင်ထင်ရှားသောလမ်းခရီးသစ်များ – အဆင့်မြင့်ခေတ်အမှီဆုံး ဒီဇိုင်းပုံရိပ်ရှိခြင်း
Luxury ကျခြင်းနှင့် မာကျောမှုတို့ကိုပေါင်းစည်းထားသောကြောင့် ကား၏အပြင်ပန်းဟာအလွန်ပေါ်လွင်ပြီး အတုမရှိအောင်စတိုင်ကျခြင်း၊ သွက်လက်ကြော့မော့ခြင်းစသောခံစားမှုမျိုးကိုပေစွမ်းနိုင်ခြင်း
သာယာငြိမ့်ညောင်းသည့်လမ်းခရီးသစ်များ – သင့်ခရီးလမ်းတိုင်းအတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ယူဆောင်လာပေးခြင်း အတွင်းခန်းဒီဇိုင်းဟာ သေသပ်၍ အနုပညာဆန်ဆန်ဖန်တီးထားမှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး Terra Rosssa အနီရောင်ကိုအသုံးပြု၍ အတွင်းခန်းအရောင်ကိုဖန်တီးထားခြင်း
၄၈၇-လီတာထိဝင်ဆံ့မှုပမာဏရှိသည့် ခရီးဆောင်အိတ်ထားသိုနိုင်သော ကြီးမားသည့်နေရာပါရှိခြင်း
လုံလောက်သည့် ဦးခေါင်းအထက် အကျယ်အဝန်း
ဇုန်နှစ်ခု (Dual-Zone) အလိုအလျောက် အတွင်းခန်းအပူချိန်ထိန်းချုပ်ပေးသောစနစ်
နောက်ခန်းထိုင်ခုံများကို6ဒီဂရီထိ လဲလျောင်းနိုင်ခြင်း
နောက်ခန်းတွင်စီးနင်းသူများအတွက် လေထွက်ပေါက်များနှင့် USB အပေါက်များ ပါဝင်ခြင်း
၈-လက်မ Infotainment Display နှင့် ကောင်းမွန်လှသည့် Audio စနစ်
ယုံကြည်မှုဖြင့် လမ်းခရီးသစ်များ – လမ်းခရီးအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း
Toyota ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိသုကာပညာအသစ် “Toyota New Global Architecture” (TNGA) ကြောင့် ယာဉ်မောင်းကို လျှင်မြန်သွက်လက်မှု၊ တည်ငြိမ်မှု၊ မြင်ကွင်းထင်ရှားမှုအပိုင်းတို့တွင် သိသိသာသာ အထောက်အကူပေးနိုင်ပါသည်။
TNGA ၏ လျှင်မြန်သွက်လက်မှု : ဤယာဉ်အတန်းစားထဲတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် ကွေ့နိုင်သော (Curb-to-Curb) အဝန်းအကျယ် ၁၀.၄ မီတာရှိခြင်း။
b.TNGA ၏ တည်ငြိမ်မှု : အထူးမာကျောတောင့်တင်းသော ကားကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် တည်ငြိမ်စွာထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်မှုနှင့် ငြိမ့်ညောင်းစွာစီးနင်းနိုင်မှုတို့ကိုအသေအချာရရှိနိုင်ခြင်း၊ ယာဉ်၏ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုနှစ်ခုတို့ကို ဟန်ချက်ညီစွာအသေးစိတ်ချိန်ညှိနိုင်ပြီး စံထားထိုက်သော ငြိမ့်ညောင်းမှုကိုရရှိနိုင်ရန် အောက်ပိုင်းဆိုင်းထိန်းစနစ်ကို ဒီဇိုင်းဖန်တီးထားခြင်း။
c.TNGA ၏ မြင်ကွင်းထင်ရှားမှု : ထိုင်ခုံတည်နေရာမြင့်ခြင်းနှင့် ရှေ့ဘောင်များသေးသွယ်ခြင်း။
Continuous Variable Transmission (CVT ဂီယာ)
ပါဝါ : 103Kw ၊ ဆွဲအား (Torque) : 172Nm
လုံခြုံစိတ်ချရသော လမ်းခရီးသစ်များ – လုံခြုံမှုအဆင့် အထူးသာလွန်မြင့်မားခြင်း
ကမ္ဘာကျော် Toyota Safety Sense နှင့် အခြားလုံခြုံမှုဆိုင်ရာသက်မှတ်ချက်များပါဝင်သောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ မောင်းနှင်နိုင်ခြင်း။
စီယာတိုင်ကို ပါဝင်အထောက်အကူပေးသော ယာဉ်လမ်းကြောသွေဖယ်သွားလျှင်အချက်ပေးသည့်စနစ်
ယာဉ်လမ်းကြောကိုလိုက်၍ ရေဒါစနစ်ဖြင့်ထိန်းပေးသော ကားရှိန်နှုန်းထိန်းကိရိယာ
SRS လေအိတ် ၇ လုံး
TOYOTA's THE ALL-NEW COROLLA CROSS online launch event is set to become the most popular
4 days September 2020 : Today, September 4, 2020, TOYOT launches The All-New Corolla Cross online launch event live.
The All-New Corolla CROSS isanew product in the new class of vehicles,amedium-sized SUV that Toyota has never seen before. Under the concept of "Dignity Urban & Vogue", the Corolla CROSS bringsasense of pride to the owners withahigher standard of living andamore urban lifestyle.
The world's best-selling Corolla has evolved over the years to meet the needs of its customers. The Corolla CROSS has been described in the Corolla History Book as "the shape of the new generation popular car" in the history of Corolla, asamedium-sized SUV is slowly gaining popularity in emerging markets. The Corolla CROSS is based on the Corolla Sedan, so its quality, Longevity and reliability are guaranteed. In addition, reasonable price; Along with the ruggedness, it also guaranteesagood price if resold. All of these are, of course, Toyota's unique trademarks.
Elegant and fast. Active Sturdy exterior and spacious, extraordinarily quiet. This car has been specially designed to give youasolid feeling, such asaremarkably quiet interior. In addition, the "All-new Corolla CROSS" is packed with great features and features, such as Power Back Door with Activated Kick Sensor and customizable storage area, designed to meet the needs and lifestyle of every customer. The car is then built with Toyota's well-known Toyota New Global Architecture, which is sure to deliver state-of-the-art driving capabilities such as agility, tranquility and visual clarity. Equipped with world-class Toyota Safety Sense (“Pre-Collision System”, “Automatic High Beam” headlights, “Lane Departure Alert” and “Radical Radar Cruise Control”) for every trip. The all-new Corolla CROSS is available witha1.8-liter petrol engine and is extremely fuel efficient and extremely fast to accelerate, Toyota said.
Under the theme "New Journey for New Leaders", the All-New Corolla CROSS aims to equip vehicle owners withafull range of technologies and functions to createa"world-class" feel and achieve success along the way.
The All-New Corolla CROSS is priced at $ 34,300 and is available in seven color options and two interior seats. Toyota has also announced that pre-orders will be available from September 4, 2020.
Distinctive new avenues: Having the most advanced design image
Combining luxury and toughness, the exterior of the car is very distinctive and stylish. Ability to feel like agility
New Delights: Bringing comfort to your every trip The interior design representsarefined and artistic design, using interior colors using Terra Rosssa red.
Large luggage compartment withacapacity of 487 liters
Adequate head area
Foot-operated rear door sensor
Dual-Zone Automatic indoor temperature control system
Comfort in the back room
The rear seats can be reclined up to6degrees
Seats Latin and cup holder
The rear seats have air vents and USB ports for passengers
8-inch Infotainment Display and excellent audio system
New routes with confidence - Ability to control all routes
Toyota's Toyota New Global Architecture (TNGA)
关键词： TOYOTA ၏ THE ALL-NEW COROLLA CROSS
Peugeot Myanmar's Franch Brand Peugeot SUV Test Drive
BMW Myanmar မှ BMW THE 1 နှင့် THE2Virtual Launch
Gold AYA Motors International Group 1 year anniversary event
Road Show of Suzuki Myanmar Motor Corporation is being held
Car owner rush to register before rule change
Myanmar Smart City One-stop integrated life service platform